pansodan gallery – Aung Soe Min
Author: pansodan gallery
Posted on 29 June 2020 21 April 2021
Online Active Exhibition : Being & Time၊ ရှင်သန်မှုနဲ့ အချိန်
Online Active Exhibition : Being & Time၊ ရှင်သန်မှုနဲ့ အချိန်၊ အချိန်အင်စတော်လေးရှင်းနဲ့ အနုပညာပွဲတော်၊ The Art of Time Epi (1) နာရီစုဆောင်းမှု ဝါသနာအိုးများအတွက် စုဆောင်းစရာနာရီများစွာနှင့်အတူ အန်းတစ်နာရီအရောင်းပွဲတော်27.6.2020 Saturday9:00 am to 7:00 pm https://www.facebook.com/PansodanScene/videos/296860631445758 Online Active Exhibition : Being & Time installation 1, ရှင်သန်မှုနှင့် အချိန်မှု (၁) Feel the amplifier and the digits, the vibrations and the web of time divisions. behind those , …
Continue reading "Online Active Exhibition : Being & Time၊ ရှင်သန်မှုနဲ့ အချိန်"
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) ရဲ့ အနုပညာစကားဝိုင်းမှာ ပါဝင်မှု
လူတစ်ဉီးချင်းရဲ့ ရွေးချယ်​ခြင်း နောက်ကျမှုတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်း နောက်ကျစေခဲ့တယ် ရွေးချယ်ခွင့်တွေများတဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့နဲ့ အနုပညာ compass တစ်ခုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် မတင်မိုးလွင် ကိုထက်အာတို့နဲ့အတူ TTU အနုပညာစကားဝိုင်းမှ
Posted on 22 July 20194March 2020
https://youtu.be/yg5hDTAOKo8 Only original songs, sung with full passion
https://youtu.be/CymHmJVCdhw?list=PLRPz7M1R5sM09oWXI5aNGkF31-jdl-pz2 A small sample of the Open History Project in Magway 2018
Bahu Festival at Pansodan Scene
https://youtu.be/AJSQe5fWT2g ဗဟုပဲြတော္ ၂၀၁၉
Hidden Memories TEDx talk
https://www.youtube.com/watch?v=d9f7Av60wTY&t=654s This isatalk in Burmese I gave at the 2016 TEDx talk. In Burmese. ခေတ်စံနစ် အမျိုးမျိုးကြောင့် သမိုင်းကို ပုံသငွ်းခံရပုံ၊ မှတ်တမ်းတွေ ပျောက်ဆုံးပုံ၊ လူထုကြားက အမှတ် သညာတေွအရေးကြီးပုံကို ဆက်စပ် တင်ပြ ပြော။
Pansodan Gallery and Scene
Pansodan Embassy in Georgia